Coenzyme Q10 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အခုလက်ရှိမှာ Coenzyme Q 10 ဆိုတာ နှလုံးရောဂါရှင်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Coenzyme Q 10ဆိုတာ ဘာပါလဲ။
ကျွနုပ်တို့ရဲ့ နေ့စဉ် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေဟာ ဓာတ်ကူူပစ္စည်းတွေ လိုပါတယ်။ အဲဒီထဲက အရေးကြီးတဲ့ ဓာတ်ကူပစ္စည်းတွေထဲမှာ Coenzyme Q 10ပါဝင်ပါတယ်။ သူဟာ ဆဲလ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ power house ခေါ်တဲ့ mitochondriaရဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကို ကူညီပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Coenzyme Q 10ဟာ ဓာတ်တိုးပစ္စ်းဖြစ်လို့ ဆဲလ်တွေ ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးမှာ အရေးကြိးပါတယ်။
Coenzyme Q 10 သောက်ရင် နှလုံးရောဂါ သက်သာတာလား?
ဒါတော့ ကံသေကံမ မပြောနိုင်ပါဘူး။ တစ်ချို့သော လူတွေမှာ Coenzyme Q 10ထုတ်စေတဲ့ မျိုးဗီဇတွေ မပါလာတာကြောင့် နှလုံးရောဂါနဲ့တကွ အခြားဓာတ်တိုးမှုဆိုင်ရာရောဂါတွေ ရကြပေမယ့် Coenzyme Q 10သောက်တိုင်း နှလုံးရောဂါ ကာကွယ်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ Coenzyme Q 10ဟာ ဆေးမဟုတ်ပါဘူး။ ဖြည့်စွက်စာ တစ်မျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို Coenzyme Q 10သောက်ရင် ဘာအကျိုးရှိလဲ?
Coenzyme Q 10ကို လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရတော့ migraine ခေါ် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ နဲ့ အမျိုးသားကျန်းမာရေး အတွက် အတော်အသင့် ထောက်ပံ့တယ်လို့တော့ အဖြေထွက်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အခြားသော လေ့လာမှုတွေ ဖြစ်တဲ့ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ အကြောဆွဲရောဂါနဲ့ သွားရောဂါတွေအတွက်တော့ အသုံးမဝင်လှပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဟယ်၊ ဒါဆို Coenzyme Q 10သောက်ရင် ဘာအကျိုးမှ မရဘူးလား?
Coenzyme Q 10သောက်ခြင်းအားဖြင့် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်လို့ အရွယ်တင်စေနိုင်မယ်။ သွေးကြောရောဂါတွေ အတန်အသင့် ကာကွယ်နိုင်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုပဲ နှလုံးရောဂါဆေး၊ သွေးတိုးကျဆေးတွေအဖြစ်တော့ သုံးလို့ မရပါဘူးဆိုတာ သိထားစေချင်ပါတယ်။ မိမိသောက်နေကျဆေးကို အဓိကထားပြီး Coenzyme Q 10ကို ဖြည့်စွက်စာအနေဲ့ အသုံးပြုကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ဒေါက်တာယမင်း (ဆေး ၁)
အခုလက္ရွိမွာ Coenzyme Q 10 ဆိုတာ နွလံုးေရာဂါရွင္ေတြၾကားမွာ ေရပန္းစားလွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Coenzyme Q 10ဆိုတာ ဘာပါလဲ။
ကြၽႏုပ္တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ဓာတ္ကူူပစၥည္းေတြ လိုပါတယ္။ အဲဒီထဲက အေရးႀကီးတဲ့ ဓာတ္ကူပစၥည္းေတြထဲမွာ Coenzyme Q 10ပါဝင္ပါတယ္။ သူဟာ ဆဲလ္တိုင္းမွာရွိတဲ့ power house ေခၚတဲ့ mitochondriaရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ကူညီပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ Coenzyme Q 10ဟာ ဓာတ္တိုးပစၥ္းျဖစ္လို႔ ဆဲလ္ေတြ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးမွာ အေရးႀကိးပါတယ္။
Coenzyme Q 10 ေသာက္ရင္ နွလံုးေရာဂါ သက္သာတာလား?
ဒါေတာ့ ကံေသကံမ မေျပာနိုင္ပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ လူေတြမွာ Coenzyme Q 10ထုတ္ေစတဲ့ မ်ိဳးဗီဇေတြ မပါလာတာေၾကာင့္ နွလံုးေရာဂါနဲ႔တကြ အျခားဓာတ္တိုးမႈဆိုင္ရာေရာဂါေတြ ရၾကေပမယ့္ Coenzyme Q 10ေသာက္တိုင္း နွလံုးေရာဂါ ကာကြယ္တယ္လို႔ မဆိုလုိပါဘူး။ Coenzyme Q 10ဟာ ေဆးမဟုတ္ပါဘူး။ ျဖည့္စြက္စာ တစ္မ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဆို Coenzyme Q 10ေသာက္ရင္ ဘာအက်ိဳးရွိလဲ?
Coenzyme Q 10ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရေတာ့ migraine ေခၚ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေရာဂါ နဲ႔ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး အတြက္ အေတာ္အသင့္ ေထာက္ပံ့တယ္လို႔ေတာ့ အေျဖထြက္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားေသာ ေလ့လာမႈေတြ ျဖစ္တဲ့ နွလံုးေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ အေၾကာဆြဲေရာဂါနဲ႔ သြားေရာဂါေတြအတြက္ေတာ့ အသံုးမဝင္လွပါဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။
ဟယ္၊ ဒါဆို Coenzyme Q 10ေသာက္ရင္ ဘာအက်ိဳးမွ မရဘူးလား?
Coenzyme Q 10ေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္လို႔ အ႐ြယ္တင္ေစနိုင္မယ္။ ေသြးေၾကာေရာဂါေတြ အတန္အသင့္ ကာကြယ္နိုင္ပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ကိုပဲ နွလံုးေရာဂါေဆး၊ ေသြးတိုးက်ေဆးေတြအျဖစ္ေတာ့ သံုးလို႔ မရပါဘူးဆိုတာ သိထားေစခ်င္ပါတယ္။ မိမိေသာက္ေနက်ေဆးကို အဓိကထားၿပီး Coenzyme Q 10ကို ျဖည့္စြက္စာအေနဲ႔ အသံုးျပဳၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
ေဒါက္တာယမင္း (ေဆး ၁)
အခုဖြစ်နေတဲ့ ကူးစက်ရောဂါ Monkeypox (မျောက်ကျောက်ရောဂါ)
By Dr Phyo
Monkeypox (မျောက်ကျောက်‌‌ရောဂါ)ကို ဘယ်လိုစတွေ့ခဲ့လဲ? Monkeypox (မျောက်ကျောက်) ဆိုတာ Poxviridae မျိုးရိုးရှိ Orthopoxvirus genus ၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ 1958 ခုနစ်မှာ မျောက်မှာ စတွေ့တဲ့အတွက် မျောက်ကျောက်ရောဂါလို့ခေါ်တွင်ခဲ့ပါတယ်။ လူတွေမှာဖြစ်ပွားတာတော့ 1970 ခုနစ်မှာ အာဖရိကနိုင်ငံတွေ့မှာ…
🤳 Screen Time နဲ့ ဇက်ကြောတက်ခြင်း ပြဿနာ
နေပူ ခေါင်းကိုက်ရတဲ့ ကြားထဲ Computer, Laptop, Phone တွေ နဲ့ တစ်ချိန်လုံး အလုပ်လုပ်နေရလို့ ဇက်ကြော‌တွေကပါ တက်လာပြန်ပြီ။ ဒီလို တစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေရင် ခက်ရချည့်ရဲ့။အကြောတွေကလဲတက် ပျို့ချင် အန်ချင်စိတ်တွေကလဲဖြစ်နဲ့ တော်တော်ကို အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါတွေဟာ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲ…
အပူဒဏ်နှင့် ချွေးထွက်များခြင်းကို ဒီလိုကာကွယ်ကြရအောင်
=========== ယနေ့အချိန်တွင် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာသည်နှင့် အမျှ ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အပူဒဏ်ကို အနည်းနှင့် အများ ခံစားကြရပေသည်။ အများအားဖြင့် နေပူထဲတွင် အလုပ်လုပ်သောသူများ၊ ကလေးများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် အပူဒဏ်ကို ပို၍ခံစားကြရသည်။အပူဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်သော ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို မဖြစ်စေဖို့ အပူဒဏ်ကို ဤသို့ကာကွယ်ကြရအောင်။ အပူချိန်လွန်ကဲလာခြင်းသည်…